Mpitondra môtô naiditra am-ponja vonjimaika • AoRaha
Mpitondra môtô naiditra am-ponja vonjimaika
Nodidian’ny Fampanoavana hotazonina vonjimaika eny amin’ny fonjan’Antanimora ilay lehilahy namely totohondry manamboninahitra iray, izay tompon’andraikitra ambony eto amin’ny firenena, teny Mamory-Ivato, tamin’ny alin’ ny zoma 11 septambra lasa teo. Natolotra ny Fitsarana ny voampanga sy ny vokatry ny fanadihadiana nataon’ny Zandarimaria eny Talatamaty, omaly. Naterina eny amin’ny fonjan’Antanimora io mpitondra môtô io, taorian’izay.
Ankoatra ny fanimbana fananan’olona dia enjehina noho ny fandratrana olona izy. Ny fifandonana saika niseho teo amin’io môtô io sy ny fiaran’ iry manamboninahitra teny Mamory Ivato no niafara tamin’ny fikasihan-tanana sy fahasimban’ ny fiara nihatra tamin’ilay manamboninahitra ambony. “Na inona na inona antony dia tsy tokony hisy fikasihan-tanana amin’ny disadisa. Azo atao ny mametraka fitoriana satria tany tandalàna i Madagasikara”, hoy ireo mpanao famotorana.
Ny Zandarimaria eny Talatamaty no nandray an-tanana an’ity raharaha ity sady tonga nijery ny zava-nisy teny an-toerana, tamin’io alin’ny zoma io. Nosamborina ilay nikasi-tanana ary nentina teny amin’ny tobin’ ny Zandarimaria Talatamaty.